ဒုက္ခသည်ခရီးစဉ်အတွင်း …. အနှစ်သက်ဆုံး ကဗျာနှစ်ပုဒ်
အို …. ဖ ဘုရားသခင်
အပိယေဟိ သမ္ပယောကော ဒုက္ခော … တဲ့
ဘာမီတွန်သောက် ပျောက် … ပေါ့နော် .. ။
အရိုးစင်းဆုံးသော လောကဒဏ် ကဗျာကို ရေးဖွဲ့လိုက်တဲ့သူက ကဗျာဆရာရဲထွဋ်ပါ။
ကမ္ဘာ့အင်အားကြီးနိုင်ငံတွေကဆောင်ရွက်ပေးနေတဲ့ ဒုက္ခသည်တွေအတွက် ဘ၀သစ်ထူထောင်ရေး ...
ပြန်လည်နေရာချထားရေးအစီအစဉ်တွေဟာ အခုဆိုရင် ထိုင်း - မြန်မာနယ်စပ်က ဒုက္ခသည်စခန်း (၉) ခုမှာကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့်စတင်ဆောင်ရွက်နေပါပြီ။
နိုင်ငံရေးလှုပ်ရှားမှုတွေ … ဘာသာရေးဖိနှိပ်မှု၊ လူမျိုးရေးနှိပ်ကွပ်မှုတွေ … ပေါ်တာနဲ့ မုဒိန်းမှုတွေနဲ့ ကင်းဝေးရာ အရပ်တခု ကမ္ဘာပေါ်မှာ ရှိနေသတဲ့ …
နောက်ပြီးတော့လည်း … အဲဒီအရပ်မှာ အလုပ်ကြမ်းသမားတွေလိုအပ်နေပြီးတော့ ဒုက္ခသည်တွေမှာတော့ လုပ်အားကလွဲရင် ဘာမဆိုလိုအပ်နေတဲ့အတွက် အပေးအယူမျှမျှနဲ့ပဲ ခေါ်သူကခေါ် သွားသူကလည်းသွား ကြနဲ့ ဒုက္ခသည်စခန်းတခုလုံး သက်ဝင်လှုပ်ရှားနေကြတယ်။
ဥပက္ခောပြုရမှာလား …. ။
အိုပီအီး … Overseas Processing Entity (OPE) ဆိုတာ ဒုက္ခသည်တွေကို သက်ဆိုင်ရာအာဏာပိုင်တွေက စခန်းထဲအရောက် လာရောက်ပြီးစုံစမ်းမှတ်တမ်းတင်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။
ယူအန်အိပ်ခ်ျစီအာကနေ ထိုင်းနိုင်ငံ အာဏာပိုင်များကို တရားဝင်လွှဲပြောင်းပေးအပ်လိုက်ပြီး ဒုက္ခသည် စခန်းရှိရာကို ကားတွေတသီတတန်းနဲ့ပို့ခဲ့ပြီးတဲ့နောက် … စခန်းတွင်းမှာ ဒုက္ခသည်ဖြစ်ကြောင်း တရားဝင် မှတ်ပုံတင်ပြီးတဲ့နောက် …. ဒါဟာ ဒုက္ခသည်များ မျှော်လင့်တောင့်တနေတဲ့ တတိယနိုင်ငံရောက်ရှိရေး အစီအစဉ်လည်း ပိုမိုနီးကပ်လာနေပြီဖြစ်ကြောင်း သိသာထင်ရှားစေတဲ့ အမှတ်သညာတခုဆိုရင်လည်း မမှားတဲ့ အခေါ်အဝေါ်တခုဖြစ်ပါတယ်။
ဒီအိပ်ခ်ျအက်စ် (Department of Homeland Security) ဆိုတာကတော့ ဒုက္ခသည်များက အိုပီအီးတုန်းက ပြောဆိုဖြေကြားချက်တွေကို ထပ်မံအတည်ပြုမေးမြန်းစုံစမ်းခြင်းနဲ့ကျန်းမာရေးဆေးစစ်ခြင်းတို့ကို တဆက် တည်းဆောင်ရွက်ပေးချိန်ပါပဲ။
ဒီအိပ်ခ်ျအက်စ်မှာ စစ်ဆေးသူများရဲ့ စိတ်ကြိုက်ဖြေဆိုပေးနိုင်ရင် အထူးသဖြင့် တီဘီပိုးရှိတယ်လို့လည်း သံသယအဖြစ်မခံရဘူးဆိုရင် … ဒီပတ်ချာဒိတ် (Departure Date) စောင့်နေယုံပါပဲ။
တောထဲမှာ မျှစ်ချိုးစားနေရသူတွေ ချက်ခြင်းစားရတော့မယ့် ဒိန်ခဲနဲ့
တောထဲမှာ တပိုတပါးသွားကျင့်ရှိနေသူများ လေယာဉ်အိမ်သာခန်းထဲမှာ ကြုံတွေ့ရမယ့်
ကြိုတင်ပြင်ဆင်ထားရန် စည်းကမ်းချက်တွေ …
ရေပူ ရေနွေးနဲ့ ရေချိုးရန်နည်းစနစ်ပါမကျန် …
ရက်တို သင်တန်း (၃) ရက်နဲ့ ဘ၀တပါးကို
( မတက်ရင် လေယာဉ်လက်မှတ်မရနိုင်လို့ပါ … )
ဒုက္ခသည်စခန်းကို နိုင်ငံရေးအသိုင်းအ၀ိုင်းကလူတွေကို ဒုက္ခသည်စာရင်းတင်ထားတဲ့ နံပါတ် (၂၀၈၆) ယောက်ကိုသွင်းစဉ်က ကဗျာဆရာ အေအမ်တီရဲ့ နို့ဖိုး …ဆိုတဲ့ ကဗျာလေးတပုတ်ထွက်လာခဲ့တာကိုလည်း အခုတခါပြန်ပြီးသတိရမိတယ်။
စားစရာ … နေစရာ
လုပ်စရာတွေ … ကိုင်စရာတွေထားရစ်လို့
တော်လှန်ရေးနယ်ပယ်ထဲမှာ ဒဏ်ခံနိုင်သူတချို့တလေက တတိယနိုင်ငံဆိုတဲ့စကားကို ကြားချင်လေ့ မရှိကြဘူး။ ဒဏ်မခံနိုင်သူအတော်များများကတော့ မျိုးဆက်သစ် တိုးတက်ရစ်ဖို့…. ဆိုပြီး တတိယနိုင်ငံကို အသွင်ကူးပြောင်းရေးရေယာဉ်ကျောထဲ အလိုက်သင့်ပေါလောပေါ်နိယာမနဲ့ …. အဲဒီထဲက တချို့ တချို့ သောသူတွေကတော့ အနီးဆုံးလက်တွဲဖော်အဖြစ် မြန်မာပြည်က ရွှေ့ပြောင်းအလုပ်သမလေးတွေ လက်ကိုတွဲလို့ ထွက်ခွာခဲ့ကြတယ်။
တချို့ကတော့လည်း တတိယနိုင်ငံကို စရိတ်ငြိမ်းသွားနိုင်ဖို့ I swear to tell the truth…. လို့ …. လက်ယာဘက်လက်ကိုထောင်ပြီး ကျိန်ဆိုထားသည့်တိုင် အစိုးရက နှိပ်စက်လို့ မနေ၀ံ့ တော့လို့ပါ … ဆိုတဲ့ မုသာဝါဒကံနဲ့အတူတူ…
တချို့ကျတော့လည်း အမှန်ကိုသာပြောပါ … လို့ သတိပေးထားတဲ့ အဲဒီ အင်တာဗျူးတာဝန်ရှိသူတွေ ကိုယ်တိုင်ကိုက သူတို့လိုချင်တဲ့အဖြေမရမချင်း ဘောင်သွင်းမေးလွန်းလို့ မလိမ်ချင်ဘဲလည်း လိမ်ပေး လိုက်ရတဲ့သူတွေလည်း ရှိသေးရဲ့။
ဥပမာ တယောက်ကိုထုတ်ပြပေးရမယ်ဆိုရင် --
တော်လှန်ရေးနယ်ထဲမှာနေတဲ့ တယောက် နာတာရှည်ရောဂါဖြစ်တော့ သူ့ညီမက သူ့ကိုစောင့်ရှောက်ဖို့ ဒီဘက်ကို လိုက်လာရတယ်။ အင်တာဗျူးတဲ့အချိန်ရောက်တော့ ထုံးစံအတိုင်း ပုံစံမေးခွန်းတခုကို မေးပါတယ်။ ဘာလို့ထွက်လာရတာလည်း …. ဆိုတာရယ် …. ဘာကြောင့်ပြန်လို့မရတော့ တာလည်း … ဆိုတာရယ် …
အကို့ကို ပြုစုဖို့လာရပါတယ် … ဆိုတဲ့အဖြေကို သူတို့မကြိုက်။ အကိုနဲ့ပတ်သက်ပြီး စုံစမ်းမေးမြန်းမှု မရှိဘူးလား … ဆိုတာကို ထပ်ခါထပ်ခါမေးလာတဲ့အခါ …. ဖြေရတာအာညောင်းလာတော့ ရှိပါတယ် လို့ဖြေလိုက်ရ …. ဘယ်လိုစစ်လည်းမေးတော့ မညာတတ်သူပီပီ မုသားလွတ်အောင် သန်းကောင် စာရင်းခဏ ခဏစစ်တယ်ဖြေလိုက်ပေမယ့် မေးသူကစိတ်တိုင်းမကျ။ အကိုနဲ့ပတ်သက်ပြီး အဖမ်းခံရ သေးလားဆိုတာကို လိုချင်သည့်အဖြေမရမချင်း ထပ်ခါတလဲလဲမေးနေတယ်။
”နောက်ဆုံးကျတော့ အတွေ့အကြုံရနေတဲ့ စကားပြန်က “ကဲပါ ညီမရယ်။ ဒီပုံအတိုင်းဆိုရင် နောက် တရက်ဆက်မေးခံနေရလိမ့်မယ်။ အကို မရှိလို့ ဘယ်သွားလဲမေးတာ မဖြေနိုင်လို့ (၃) ရက်လောက် အချုပ်ခံခဲ့ရတယ်။ အဲဒါကြောင့်ထွက်လာရတယ်လို့ပဲ ကျနော်ပြောလိုက်တော့မယ်နော် … လို့ခွင့်တောင်းပီး ကျနော့်ကို အချုပ်ထဲ သုံးရက်လောက်ထည့်ပေးလိုက်တယ်အမရယ်“ လို့ အင်တာဗျူးကအပြန် မှာအတွေ့ အကြုံရှင်းလင်းပွဲလုပ်ခဲ့တာကို သတိရမိတယ်။
မလိမ်ညာပါဘူး။ အမှန်ကိုပဲပြောပါ့မယ်လို့ … လက်ထောင်ကျိန်ခိုင်းပြီးတော့မှ လိုချင်တဲ့အဖြေရသည့်အထိ မလိမ်မချင်း ချောင်လိုက်ပိတ်နေတာကတော့ စိတ်ခံစားချက်ကို တမျိုးဖြစ်စေတာအမှန် …
တကယ်တန်းက အလုပ်သမားဖြစ်ချင်သူတွေနဲ့ ….. အလုပ်သမားလိုအပ်နေသူတို့ရဲ့တွေ့ဆုံပွဲမှာ သူတို့ ဘက်က ဘာမှ ကျိန်စာတိုက်နေဖို့မလိုပါဘူး။
မြန်မာပြည်ထဲက အဓိကအထွက်အများဆုံးအကြောင်းအရင်းကတော့ အစိုးရဲ့ လူမဆန်တဲ့လုပ်ရပ်တွေ ကြောင့် လူလိုမနေရတဲ့ဘ၀တွေထဲက ရုန်းကန်ပြေးထွက်လာကြခြင်းပါပဲ။
သည်ထဲမှာမှ စီးပွားဖြစ်လုပ်စားချင်သူ တချို့တလေ ရောနှောညပ်ပါနေတာတော့ ဘယ်နှယ်လုပ် ရွေးထုတ် နိုင်ပါ့မလဲ။ ဒုက္ခသည်အတု တော်လှန်ရေးသမားအတု … တွေရဲ့ အမေရိကန်သို့ စရိတ်ငြိမ်းခရီးစဉ်မှာ လိမ်ညာတာကို ဒါလေးများ …. ဒါလေးများလို့တောင် သီချင်းဆိုနေကြမည့်သူတွေ….. ရှိနေတတ်တာ ဟောဒီဘဒ္ဒကမ္ဘမှာ လူ .. ဆိုတာဖြစ်တည်ကတည်းက ဒွန်တွဲပါလာပြီးသား ကံကြမ္မာတခုလို ….
အို … ဒုက္ခသည်များဆိုင်ရာနတ်
အဲန်ဂျီအိုရေးရာ နတ်အပေါင်းတို့ ….
ကံကြမ္မာကို …… ။
အကြောင်းအမျိုးမျိုးနဲ့ …. အမိမြန်မာပြည်ကိုပဲဖြစ်ဖြစ် .. အမိမြေနဲ့အနီးစပ်ဆုံးတော်လှန်ရေးနယ်မြေကပဲ ဖြစ်ဖြစ် … တော်လှန်ရေးနယ်မြေက စီးပွားရေးနယ်မြေသစ်တခုကိုရည်ရွယ်လို့ပဲဖြစ်ဖြစ် … အဲဒီ ပြန်လည် နေရာချထားရေးယဉ်ကျေးမှုစီးကြောင်းထဲမှာ အလိုက်သင့်မျှောပြီး လိုက်ချင်သူတွေက လိုက်ပါသွားကြ ပါလိမ့်မယ်။
ကျန်ရစ်သူတွေထဲမှာတော့ သားတကွဲ … မယားတကွဲတွေရဲ့ နာကျင်မှုတွေ …. မိတ်ဆွေသင်္ဂဟတွေရဲ့ ရွေ့လျားဝေးကွာရတဲ့ အထီးကျန်ဝေဒနာတွေ …. မြန်မာ့အရေးလုပ်စရာတွေတပုံကြီးနဲ့ လုပ်မယ့်သူတွေရဲ့ တကယ့်လက်တွေ့အလုပ်ပုံကြီးအောက်က အနားမရတဲ့နေ့ရက်တွေကြားမှာ …. ထွက်ခွာသွားနိုင်ရေး လုံ့လပြုနေသူတွေအပေါ်မှာလည်း အပြစ်မတင်သာ …. ထွက်ခွာသွားမှာကိုလည်း မလိုလား .. ကျပ်တည်း ခက်ခဲတဲ့အခြေအနေအရပ်ရပ်ကိုလည်း နားလည်နိုင်သော်ငြားလည်း
တဖြေးဖြေးလျော့ပါးလာတဲ့ နိုင်ငံရေးအင်အားစုတွေကို ပြန်လည်အားကောင်းလာအောင်မျှော်လင့်ရင်း ……
သူတို့ကြောင့် …. ။